အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်လျှော China Manufacturer
အခုတော့ chat ဆက်သွယ်ရန်ပေးသွင်း
roller Shutter တံခါး
crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
Shenzhen Hongfa Automatic Door Co., Ltd.
 လျ：86-0755-81781055 အီးမေးလ်ပို့ရန်：kevin@hongfadoor.com
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Service
အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , West Europe , Worldwide
ထုတ်ကုန်:51% - 60%
ဖေါ်ပြချက်:Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလျှပ်စစ်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း,Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်,Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်စျေး
self-Recovery ကို Rapid တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး
overhead အပိုင်းတံခါး >
roller Shutter တံခါး >
သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
လူမီနီယမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် > အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်လျှော
USD 1500 - 800 / Set/Sets
1 Set/Sets USD 1500 / Set/Sets
1 Set/Sets USD 800 / Set/Sets
min ။ အမိန့်:
 အခုတော့ chat
Open Style: Sliding
Surface Finishing: Finished
ထွက်နိုင်ရေး: 500 sets per month
Supply နိုင်ခြင်း: 500 sets per month
လက်မှတ်: ISO9001, CE,SGS, TUV
HS Code ကို: 7308300000
လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတယ်လီစကုပ်တံခါးကိုအဓိကအားတံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးမောင်းနှင်မော်တာတစ်ခုဆလိုက်ရထားလမ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိနှင့်လူမီနီယံအလွိုင်း profile များကိုဖန်ဆင်းသည်နှင့် parallelogram နိယာမအားဖြင့် hinged ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ drive ကိုအထူးမော်တာ, တီကောင်နှင့်ပိုးဂီယာ deceleration မောင်းနှင်ခြင်း, အလိုအလျှောက် clutch သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် clutch ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ display ကိုအကြောင်းအရာ 300-500 စကားလုံးများကိုဖော်ပြပေးတဲ့ scrolling မ Display ကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကလူသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထုအရှင်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာ, 20-30CM အခါအလိုအလျှောက်အလုပ်ပြန်လာနိုင်သည့်အသိဉာဏ်အနီအောက်ရောင်ခြည်စုံစမ်းစစ်ဆေး Anti-တိုက်မှုကိရိယာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလျောက် clutch ကိုပယ်ဖြတ်သောအခါအလိုအလျှောက်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်နီးစပ်နိုင်ပါတယ်။ လက်စွဲ clutch ကိုပယ်ဖြတ်သောအခါကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နီးကပ်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က control panel ထဲက, တွန်းအားပေး button ကို switch သည်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းတပ်ဆင်ထား။
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါးဝဖျေါပွခကျြခေါက် 1. တိုးချဲ့မှု:
Item NO: HF--J1379
Size: L10000mm*W660mm*H1600mm.can be adjustable as yours
Material: 201SS (304SS option)
Brand: SSCL or as yours
Applications: Factory/enterprise , School/institute/university , Government/residential ,etc.
Style: Modern and fashionable
Fob price Gate body:USD69-120/m Motor:Get latest price
MOQ: 1PCS / Customized 100meters
Payment Term: T/T,PAYPAL,MONEYGRAM,WESTERN UNION ,CREDICT CARD
Sample Lead Time: 5-7days
Production Lead Time: Usually 10-15days (depends your quantity)
တံခါးဝမော်တာအကြောင်း 2. :
Motor style: 4-wheel trackless
Power: 370 / 550 / 750W
Engine voltage & frequency: 220V ± 10% , 50HZ
Operation current: ≤2.5A x 2
Working temperature: -45 °C - +75 °C
Moving speed: 17-19m/min
ဒီတံခါးဝရဲ့လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအကွောငျး 3. :
HF electric wire:
32 core cable ,in -45 °C condition it can be bent ,straight back
and forth 200 hundred thousands times ,the cable won't be cracked or broken.
Other's electric wire: 16 core cable , in -40 °C condition it will be frozen stiff and be easy cracked ,broken.
1.Inside is foam plastic board , paper carton . outside is strong wooden case.
2.We can aslo make the packing as yours.
Q1 ။ ဘယ်နှစ်ယောက်အလုပ်သမားများကိုစက်ရုံအတွက်?
ဖြေကျနော်တို့ 50 ကျော်အလုပျသမားရှိသည်။
Q2 ။ လစဉ်စွမ်းရည် What`s?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တစ်လလျှင် 100set ဖြစ်ပါတယ်။
Q3 ။ What`s ပစ္စည်းအရည်အသွေးစံ?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏တံခါးများ iso9001 ce, SGS, လွန်သွားနိုင်ပါတယ်။
Q4 ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအရွယ်အစား customerized ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
Q5 ။ ငါရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများများအတွက်နမူနာရနိုင်မလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အခမဲ့နမူနာပေးနိုင်ပါသည်, သို့သော်အမြန်ကုန်ကျစရိတ်သင့်အကောင့်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။
Q6 ။ တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်အဘို့အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကဘာလဲ?
ဖြေပုံမှန်အားဖြင့် 1set, သင်မူကားအနည်းငယ် ပို. မြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုလက်ခံနိုင်လျှင်ငါတို့သည်လည်းသေးငယ်တဲ့ပမာဏထောက်ခံပါတယ်။
Q7 ။ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကဘာလဲ?
ဖြေပုံမှန်အားဖြင့်ကမည်မျှအမိန့်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာပေါ် မူတည်. 7days ဖြစ်ပါတယ်။
Q8 ။ ငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းကဘာလဲ?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းမျက်မှောက်မှာ T / T နဲ့ L / C ကိုဖြစ်ကြသည်။
Q9 ။ သင်ဘယ်လိုအရည်အသွေး gurantee သလဲ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်နှစ်အာမခံ, ဤကာလအတွင်းမည်သည့်အရည်အသွေးအပြဿနာများထောက်ခံနေကြတယ်
အခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း၏, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း 1% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို 20-8000 ဇာတ်ကောင်များအကြားဖြစ်ရပါမည်
အလိုအလျောက်လူပျို / နှစ်ချက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တာရှည်ခံခေါက် Up ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး
ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်ကိုယ်ပိုင်လျှော်ကြေးကုလားကာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး
Windows နဲ့ automatic အပိုင်းအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းကားဂိုဒေါင်တံခါး
လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ချက်မြန်နှုန်းမြင့် roller ရှပ်တာ
စမတ်အော်တိုအာရုံခံတံခါး Up ကိုခေါက်
ဆင်ခြင်တုံတရား layout ကိုအတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဓာတ်လှေကားတံခါးဝ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးပေါက်
foam Panel ကိုစက်မှုကဏ္ဍကိုအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းတံခါး Secure
Mlango လူမီနီယမ်ကြိတ်စက် shutter ပြင်ပလျှပ်စစ်တံခါး
အလိုအလျောက် Radar PVC ကြိတ်စက် shutter speed တံခါး
PVC ကြိတ်စက် Shutter အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလျှပ်စစ်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်စျေး Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလျှပ်စစ်ဂိတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် PVC ဇစ်မြန်ကြိတ်စက်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း ရိုးရှင်းသောခက်မြန်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သော PVC ကြိတ်စက်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Shenzhen Hongfa Automatic Door Co., Ltd. All rights reserved ။